Sarms Chitoro Nezvedu
Kubva kuUK, Isu tiri Sarmsstore tenda mukuwedzera hupenyu hwehupenyu uye uchida kugadzira nhanho irinani pakati pejimu nemararamiro. Nekubatsira vatengi vedu kuzadzisa mhedzisiro yavo nenzira inoshanda.
Isu tinotengesa mhando yepamusoro Sarms & zvokuwedzera izvo zvakachengeteka, zvinoshanda & zviri pamutemo. Izvi zvinogadzirwa muUK kusvika kumhando yepamusoro soro uchishandisa mishonga yezvigadzirwa zvemishonga. MaSarms ari kushandiswa achiwedzera nekuwedzera pakati pevakavaka muviri, vatambi & general gym goers avo vanoda kuvandudza iwo muviri wavo.
MaSarm kirasi nyowani yekuwedzera izvo zvino zvaenderera dzimwe dzese dzimwe nzira dzekuwana mhasuru uye kurasikirwa kwemafuta. Steroid & prohormones izvozvi zvaonekwa sekuti hazvichashandi uye hazvipe iyo yakafanana njodzi-mubairo unoitwa nemaSarms.
MaSarms kazhinji haana kana kune mashoma madiki mhedzisiro asi achiri kupa yakakura mhasuru yekuvaka & mafuta kurasikirwa zvivakwa. Maarms haana chiropa chine chepfu, haakonzere chero mhanza yekuchinja uye zvimwe zvisingadiwe mhedzisiro inoitwa neSteroids, peptides & prohormes!
Kusiyana nesteroid, maSarms akagadzirirwa chaizvo kuti asunge chete kune mahasuru receptors.
Steroid & prohormones inosunga kwete chete kune avo vanogamuchira mhasuru asiwo kune yakawanda nhamba yekugamuchira inosanganisira huropi, vhudzi nemeso. Izvi ndizvo zvinokonzeresa mhedzisiro senge Mood swings, bvudzi-kurasikirwa uye nenyaya nechiratidzo. MaSarms anogona kazhinji kunzi "Mugadziri Steroid" kunyangwe isiri steroid asi nzira iyo iyo yaunogona kupa inoshamisa mhasuru kuwana & kurasikirwa kwemafuta zvivakwa pasina chero mhedzisiro mhedzisiro ndiyo inopa zita remadunhurirwa. Mazhinji maSarms haaderedze ako echokwadi testosterone mazinga izvo zvinoreva kuti hapana kudikanwa kwePCT. Vamwe vashandisi vanomhanyisa yakasikwa testosterone booster mushure mekutenderera asi zvisingawanzo kudikanwa. Izvi zvinoreva kuti unochengeta zana muzana yezvawakawana.
Ongororo yeSarm zvivakwa
Pazasi isu takanyora hunhu hukuru hweSarm yega yega, kubatsira kupa muongororwo wezve maSarms angangotorwa zvakanakira ivo vese vashandisi zvinangwa.
Muviri Wakavakwa Labs Ostarine MK-2866 "Wese anotenderera" Zembera mhasuru kuwana & Fat kurasikirwa nezvakaoma zvakanyanya kuwana-kuwana pasina kuchengetedza mvura.
Muviri Akavakirwa Labs Ibutamoren MK-677 "Hormone yekukura" Kuchawedzera mazinga eGH mumuviri. Yakavandudzwa nguva yekudzoreredza, kugara zvakanaka, kuomarara uchiwedzera mhasuru uye kusunungura kurasikirwa kwemafuta. Zvakare anoporesa mapfupa uye tendon yakakura yekumhanyisa kupora & kugadzirisa.
Muviri Akavakwa MaLab Testolone RAD-140 "Anabolic 90: 1" Ichi chakanyanya anabolic Sarm iyo inokonzeresa kusadzvinyirirwa uye inozoguma mukuwana kukuru kwemhasuru uye isingape mushandisi yekuchengetedza mvura. Chinhu chakakura chevaya vari kutsvaga kuwana mhedzisiro munguva ipfupi yenguva.
Muviri Akavakwa MaLabhadhi Cardarine GW-501516 "Kutsungirira & Kurasikirwa Kwemafuta" Kunyangwe mushure mechiyero chekutanga iwe uchacherekedza iwe unogona kumhanya kwenguva yakareba, rep zvakanyanya uye kutaridzika zvakanyanya vascular. Iyi Sarm inobatsira vashandisi kutyora platous & kubvisa mafuta asingadiwe. Inoshanda zvakanaka yega asi inonyatso pinda mune yayo kana stacked ne S4 & kana Ostarine
Muviri Wakavakwa MaLab Andarine S4 "Kucheka Sarm" Yakakura kune vashandisi kucheka sarm iyi inonyatso kupenya. Inoisa muviri munzvimbo yemafuta kupisa uchichengetedza tsandanyama uye nekuwedzera vascularity. Zvivakwa zvinotsanangurwa zvakafanana ne winstrol ichi chakakura chakazara.
Muviri Wakavakwa Labs S-23 25mg "Vashandisi Vane Ruzivo" Wakasimba kudarika Ostarine, izvi zvinokurudzirwa kune vashandisi vanoda mimwe mibairo yakaoma munguva pfupi.
Muviri Akavakwa MaLab Ligandrol LGD-4033 "Misa & Kuporesa" Yakanakisa Sarm yekugona kuisa pamhasuru & uremu munguva ipfupi yenguva. Zvakare zvidzidzo zvinoratidza kuti zvinowedzera kuwedzera kwefupa uye kudzorera kukuvara.
Muviri Wakavakwa MaLab Stenabolic SR-9009 "Fat Anobata" Yakanakisa kurasikirwa kwemafuta sarm, iyi sarm inoshanda nekuita kuti muviri uburitse mamwe mitochondria zvichikonzera muviri kupisa mafuta akawanda uye kugadzirisa kutsungirira. Kudonhedza kune iri Sarm ihwohwo hupfupi hafu hupenyu hupenyu zvichireva kuti inofanirwa kutorwa yega 2-4 maawa. Vashandisi vasina hanya izvi vanofanirwa kufunga nezve sarm iyi.
Muviri wakavakirwa Labs ACP-105 "Kukura kwemhasuru" Iine kumwe kuchengetwa kwemvura asi inopa kuwedzera kukuru mukukura kwemhasuru uye simba. Yakaratidza 66% yakasimba kupfuura testosterone.
Muviri Wakavakirwa Labs Kutanga Kucheka Stack - Yakakura kune mumwe munhu mutsva kumasarms achitsvaga kurasikirwa kwemafuta kutanga.
Makirabhu Akavakwa Muviri Pakati Cheka Kucheka - Yakanaka kune mumwe munhu arikutsvaga akawanda anorema ekurasikirwa nemafuta nyowani kana aripo mushandisi weSarms.
Muviri Wakavakirwa Labs Yakawedzera Shredding Stack - Iyi ndiyo yakanakisa stack inowanikwa yekusunungura mafuta akawandisa uye uchiri kuwana kana kuchengetedza mhasuru.
Muviri Wakavakirwa Labs Kutanga Muscle Stack - Yakakura yekupinda nhanho kune maSarms evashandisi vari kutsvaga kuwedzera mashoma makirosi etsandanyama pane mumasere masere kusvika gumi nemasere.
Muviri wakavakirwa Labs epakati Muscle Stack - Inokwanisa kuwedzera 5-10kg yemhasuru mune ye8-12 vhiki.
Muviri Wakavakwa MaLabhodhi Akawedzera Musuru Stack - Iyo yakanakisa stack inowanika yekuwedzera saizi yemhashu pa
Muviri Wakavakwa MaRabhani Yohimbine HCL - "Yakakurudzira mafuta anopisa" Tinokurudzira Yohimbine semafuta edu anopisa sarudzo. Yohimibine haisi Sarm iyo yakasarudzika Muti Bark asi ine inoshamisa mafuta kurasikirwa zvivakwa uye inoshanda kwazvo nechero Sarm.
SARMS inzira yakachengeteka, yepamutemo kune steroids: kirasi yekubudirira yezvinowedzera zvinoshanda zvakafanana neprohormones & anabolic steroids pasina mhedzisiro. Kazhinji inonzi Designer steroids, SARMS inomiririra Selective Androgen Receptor Modulator. Kusiyana nevanabolic steroid kana prohormones ayo ane tsika yekusunga kune asingadiwe maakagashira senge bvudzi nemaziso uye zvinokonzeresa zvisingadiwe mhedzisiro, maSARM anoshanda nekusarudza nekusunga kune iyo androgen receptors mumhasuru & pfupa. Kusunga kuno sarudza kunokonzera kuwedzera kwakanyanya mukuita uye kupora uye sarudzo inokwezva kune avo vane hanya nehutano hwavo & nezve zvingangoitika mhedzisiro.
Chii chandingatarisira kubva kuSARMS yangu kutenderera?
Mazhinji maSARMS anogona kuturikidzana kuitira kuti awedzere mhedzisiro mukuonda kwemhasuru kukura uye kurasikirwa kwemafuta. Nekugadzirisa yako SARMS kutenderera uye kurongedza, iwe unogona kugadzirisa mugumo mhedzisiro iwe yauri kuyedza kuwana. Mhedzisiro mhedzisiro inogona kuve 3kg-10kg kuwedzera mune yakaonda tsandanyama nyama nepo ichirasikirwa yakawandisa emuviri mafuta muzana.
Ini ndichachengeta zviwanikwa zvangu kubva kune yangu SARMS kutenderera?
Hongu! Kupa izvo kudya kwako uye kudzidziswa kunoramba kuri mukutarisa, iwe unogona kutarisira kuchengetedza zvese zvako mhedzisiro mushure mekupedza iyo SARMS kutenderera. Kusiyana neprohormones & Anabolic Steroids SARMS haikonzere kudzima (muviri unomira kuburitsa testosterone yechisikigo) izvi kazhinji nei vashandisi vanobuda mukutenderera kwavo vakasunungura yakawanda yavo mhedzisiro sezvo mahormone avo asingakwanise kuchengetedza mhasuru inoiswa panguva yekutenderera. Neraki revashandisi veSARM, izvi hazvisizvo uye mahormone anowanzo sara asina kubatika.